Ukuphupha ngePuppet Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Unodoli ngopopayi onamalungu athile ancanyathiselwe yimitya. Nangona kunjalo, ukuzisa unodoli ebomini, njengomntu onodoli, kufuneka ubenobuchule bokudlala oonopopi kwaye wazi ngqo ukuba uza kuwutsala nini kwaye njani umtya wokuhambisa intshukumo ehambelana nopopayi.
Unodoli udla ngokwenziwa ngomthi. Uninzi lwethu lucinga ngeAugsburger Puppenkiste kunye nohambo lukaJim Knopf, uLukas okanye u-Urmel. Kodwa umntu unokubizwa ngokuba ngunodoli xa abanye bemsebenzisa gwenxa ngeenjongo zabo.
Ukuba unodoli ubonakala kuthi ephupheni, omnye unokuzibuza ukuba kunokwenzeka na ukuba omnye alawulwe ngomnye. Utolika njani ngokuchanekileyo umfanekiso wephupha "lonodoli"?
1 Uphawu lwephupha «Unodoli» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Unodoli» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Unodoli» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Unodoli» - Ukutolikwa ngokubanzi
Unodoli njengomfanekiso wephupha ufuzisela ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ubudlelwane obuxhomekeke.
Ukuba nguwe ophethe ipopu kwaye uqondisa iintshukumo zento yokudlala, uya kufuna ukuhlala unento yonke ephantsi kolawulo ngokwenyani. Ukuphupha kuhlala uzama ukuphembelela abanye abantu kuba uqinisekile ukuba yimbono yakho kuphela echanekileyo kwaye inexesha elifanelekileyo. Nangona kunjalo, ngokwenza njalo, awuziboni izimvo zabanye abantu. Ukuba uphethukele kubo ngengqondo evulekileyo, unokubona indlela ekucebisa ngayo ukujonga ngaphaya komkhamo wakho.
Ukuba ubona abanye abantu bedlala noonopopi kwi el mundo yamaphupha, oku kungabuyisa iinkumbulo zobuntwana. Ukubona umboniso woonopopi ephupheni kukwathetha ngento enokwenzeka Ukubuyela kumntwana lomntu uphuphayo. Uhlala enqwenela ukubuyela kwixesha apho ebekhathalelwe kwaye ekhuselwa kwaye akukho xanduva luwe emagxeni akhe. Le nxalenye yobuntwana yenza ukuba kube nzima kuye ukuba azenzele ngokuzimeleyo kwaye enze izigqibo ezifanelekileyo.
Uphawu lwephupha «Unodoli» - ukutolikwa kwengqondo
Umfanekiso wephupha "woonopopi" ungasibonisa ukuba nathi ngokwethu mhlawumbi ngendlela efihlakeleyo nengacacanga evela kwilizwe langaphandle ukusetyenziswa yiba. Kuxhomekeke ekubeni ngubani okhokela unodoli ephupheni, oku kukwabonisa ukungalingani okunokubakho kumbutho okhoyo.
nanjalo ukongamela ngokwesondo unokuzalwa ngokudlala ngonodoli. Ngokomgaqo, oku akufuneki ukuba kutolikwe kakubi. Kubalulekile ukuba kusetyenziswe izivumelwano ezicacileyo kwaye omabini amaqabane ayazazi iindima zawo. Nangona kunjalo, ukuba kukho uluvo lokuba amabango ayenziwa angenakho okanye angazukufezekiswa, oku kufuneka kuchazwe ngokucacileyo. Nika ingqalelo kwimvakalelo yakho kwaye ungenzi nantoni na ongenakukwazi ukuthi "ewe" usuka emazantsi entliziyo.
Unodoli kufuneka atolikwe ngokufanayo nesimboli yamaphupha kanodoli. Ke ngoko, kunokuba sengqiqweni ukubandakanya iinkalo zokutolikwa kwalo mfanekiso wephupha ekutolikeni ngephupha kanopopi.
Uphawu lwephupha «Unodoli» - ukutolika kokomoya
Ngopopu ephupheni, ubonisa ephupheni ukuba yena ngokwakhe udlala indima kubomi basemhlabeni obonelelwe ngumphefumlo. Unguye, njengaye nawuphi na umntu,Inxalenye yomfanekiso omkhulu.